ODUU : HAALLI OBBO DAAWID IBSAA KEESSA JIRAN BEEKAMAA MITI JEDHAME – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsODUU : HAALLI OBBO DAAWID IBSAA KEESSA JIRAN BEEKAMAA MITI JEDHAME
Oromoon Goota isaa caalaa,Gantuu isaaf dhukkubsata!
Oromoonni siyaasa hubatan,kan siyaasa irraa dhimma hin qabnes yeroo dheeraaf Jaal.Daawudiin jibbaa turan! Ammas kan jibban hedduudha. Madda jibba isaanii garuu ofiima isaaniyyu waan beekan natti hin fakkaatu.
Inni tokko sababa miseensa ABO tokko faana wal dhabeef ABO’s Jaal.Daawudis jibbuutti seena.inni kaan immoo jatte jattee dhaga’ee jibbaaf laphee bana,warri kaanimmoo sababoota barruuf hin tolleef jibbu.
Kan isa hubatan fi jaallatan immoo baayyee mararsiifatu! Warri siyaasaan uummata gaggeessan hedduun immoo inaaffaa fi ilaalcha gad-aantummaa irraa kan ka’e jibbanii,hordoftoonni isaanis akka jibban balbala banuuf. Ciichuu fi ejjannoo qabaachuun isaa jibbaaf isa saaxilee tureera.
Keessumaa baroota sadii dura Oromooti hedduun sababa malee jibbanii waan baayyee jechaanii turan.
Kanan yaadadhu keessaammoo warri social media irraa active turan Jaal.Daawudiin angoo irra turuu isaatti qeequ.qeeqni isaanimmoo angoo qofaaf miti.namoota isaan akka Waaqaatti leellisan siyaasaan waan kufaniif,jaal.Daawud akkamitti ABO jiraachisee yoona ga’e kan jedhu irraa madda.
Fkn.Dr.#Mararaan erga KFO hundeesse waggaa 22 ga’erra.hogganaas jira.
#Mallas waggaa 20-22 hogganee du’e.
#Isaayyaas waggaa 60’f bulchaa jira. Waggaa 30 bosona keessa,waggaa 30 Ertiraa bulchaa jira!
Jaal.#Daawuud waggaa 23 hin ga’u erga ABO hogganuu jalqabe. Maaliif kan isaa kun addatti gaaffii ta’e yeroon jedhee yaadu na ajaa’iba.gaaffilee fi jibbi akkasii immoo kan maddu namoota ABO irraa fagoo jiran fi jaarmiyaalee caccabduu garaagaraa keessa ruuqamanii ta’aniinidha.
Har’a Jaal.Daawud hoggana Oromoo eenyu caalaa umrii isaa malee dulloomee,dhugaa fi haqa dhaabateef nama dararamaa jirudha. Nama akkasitti daba yaaduu fi afaan itti darbuun Waaqaaf lafa irratti cubbuu guddaadha.
Jibbis sababa qabaachuu qaba.inaaffaanis daangaa qabaachuu qaba.hoggana akkasii qabaachuu keenyatti silaa kan itti boonnu fi dhaadannu ture. Har’a Jaal.Daawud erga manatti ugguramee ji’a lakkoofsise.akka hoggantoota kaanii hidhaa Qaallittii fi Qilinxoo bu’ee namni dhaqee fayyummaa isaa isa hin gaafatu.
Manatti uggguramuu isaa malee lubbuun jiraachuu isaa sadarkaa qulqulleeffachuu hin dandeenye keessa jirra. Oromoon garuu dhimma Jaal.Daawud Ibsaa maaf callise laata !?
Dhugaaf Dalagi Best